mandeha ho azy ny faritra voafefy ranomandry mofomamy natao mofomamy manao Ma ...
biraonao mandeha ho azy kubba kely kibbeh encrusting mạch ...
Fandoavam-bola Terms: T/T, L/C,D/A,D/P,
Io milina mandeha ho azy feno dia ahitana ny iray karazana milina encrusting, nohitsakitsahiko milina iray, ary ny iray lovia-milina ny fampifanarahana. Amin'ny fampitomboana na fanovana tsy voatery fitaovana sy ny fitaovana, io tsipika famokarana mety azo ampiasaina koa mba hamokarana sakafo maro hafa / Snack / mofomamy.
2000 ~ 4500 tapa / hr
15 ~ 180g / tapa
Tokony ho 2.0 KW, 220V
Lafiny (L * W * H)
* 178 * 50 100 sm
Tokony ho 310 kilao
1) asa Vonjeo vola izany any aoriana any. Afaka manao sakafo samy hafa
2) ny antonony vidiny sy ny fahaizana avo.
3) Easy for fandidiana, manadio, mivory, ary nanamboatra.
4) fitaovana samy hafa dia azo ampiharina ho an'ny encrusting vokatra.
Previous: mandeha ho azy Breziliana akoho coxinha milina fanaovana
Next: mandeha ho azy gilasy mochi milina fanaovana
Maamoul Izaho Jehovah no manao Machine
Maamoul Manao Machine
Maamoul diabe Line
mandeha ho azy kubba kibbeh kubbeh milina fanaovana
Automatic loko roa biscuit milina fanaovana
mandeha ho azy milina fanaovana mofomamy mananasy
mandeha ho azy Breziliana akoho coxinha milina fanaovana
mandeha ho azy daty bara voankazo toeram milina fanaovana